Phuhlisa iResume yakho yoLuntu | Martech Zone
Kwimveliso yethu, ukuqhubeka kwakhona kwezentlalo kuyimfuneko. Ukuba ungumgqatswa okhangela umsebenzi kwimidiya yoluntu, kungcono ube nenethiwekhi enkulu kunye nobukho kwi-Intanethi. Ukuba ungumgqatswa okhangela umsebenzi kulwakhiwo lweinjini yokukhangela, kungcono ndikwazi ukukufumana kwiziphumo zokukhangela. Ukuba ungumgqatswa okhangela umxholo wentengiso, kungcono ndikwazi ukubona umxholo odumileyo kwibhlog yakho.
Imfuno ye- ukuqhubeka kwezentlalo ihamba ngaphaya kweshishini lethu ngoku. Imibutho kunye nabaqeshi basebenzisa iisayithi zosasazo zasekuhlaleni kunye neinjini yokukhangela- hayi ukuba baphonononge abagqatswa- kodwa nokubafumana. Ngaba banokukufumana? Ngaba uyalakha igunya kwi-intanethi lophawu lwakho lobuqu?
Ukuqala kwakhona kwidijithali kwezentlalo kukuthatha kwakhona kwesiqhelo. Ngelixa ngokuqinisekileyo kufuneka ubandakanye amava akho omsebenzi kunye nemfundo kwi-resume yakho yentlalo, ungalwandisa ulwazi olunikezela kubaqeshi abanokubakho ukuba babandakanye iisampulu zomsebenzi, amakhonkco afanelekileyo nokunye.
tags: Igunyauphando lomsebenzibaqeshiukuqashwaukuqhubeka kwezentlalo
Jan 25, 2013 ngo-2: 10 PM
Iposti entle kwi-infographic!